Blockchain Capital စျေး - အွန်လိုင်း BCAP ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Blockchain Capital (BCAP)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Blockchain Capital (BCAP) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Blockchain Capital ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Blockchain Capital တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Blockchain Capital များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Blockchain CapitalBCAP သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.5Blockchain CapitalBCAP သို့ ယူရိုEUR€2.13Blockchain CapitalBCAP သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.91Blockchain CapitalBCAP သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.29Blockchain CapitalBCAP သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr22.55Blockchain CapitalBCAP သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.15.86Blockchain CapitalBCAP သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč55.73Blockchain CapitalBCAP သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł9.39Blockchain CapitalBCAP သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.33Blockchain CapitalBCAP သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.51Blockchain CapitalBCAP သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$56.05Blockchain CapitalBCAP သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$19.35Blockchain CapitalBCAP သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$13.44Blockchain CapitalBCAP သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹186.71Blockchain CapitalBCAP သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.422.75Blockchain CapitalBCAP သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.43Blockchain CapitalBCAP သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$3.81Blockchain CapitalBCAP သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿77.7Blockchain CapitalBCAP သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥17.35Blockchain CapitalBCAP သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥266.39Blockchain CapitalBCAP သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2961.52Blockchain CapitalBCAP သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦969.12Blockchain CapitalBCAP သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽183.24Blockchain CapitalBCAP သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴69.19
Blockchain CapitalBCAP သို့ BitcoinBTC0.000221 Blockchain CapitalBCAP သို့ EthereumETH0.00671 Blockchain CapitalBCAP သို့ LitecoinLTC0.047 Blockchain CapitalBCAP သို့ DigitalCashDASH0.0291 Blockchain CapitalBCAP သို့ MoneroXMR0.0294 Blockchain CapitalBCAP သို့ NxtNXT204.14 Blockchain CapitalBCAP သို့ Ethereum ClassicETC0.376 Blockchain CapitalBCAP သို့ DogecoinDOGE742.94 Blockchain CapitalBCAP သို့ ZCashZEC0.0315 Blockchain CapitalBCAP သို့ BitsharesBTS98.48 Blockchain CapitalBCAP သို့ DigiByteDGB85.35 Blockchain CapitalBCAP သို့ RippleXRP9.01 Blockchain CapitalBCAP သို့ BitcoinDarkBTCD0.0878 Blockchain CapitalBCAP သို့ PeerCoinPPC8.41 Blockchain CapitalBCAP သို့ CraigsCoinCRAIG1161.81 Blockchain CapitalBCAP သို့ BitstakeXBS108.66 Blockchain CapitalBCAP သို့ PayCoinXPY44.48 Blockchain CapitalBCAP သို့ ProsperCoinPRC319.67 Blockchain CapitalBCAP သို့ YbCoinYBC0.00137 Blockchain CapitalBCAP သို့ DarkKushDANK817.95 Blockchain CapitalBCAP သို့ GiveCoinGIVE5521.14 Blockchain CapitalBCAP သို့ KoboCoinKOBO580.73 Blockchain CapitalBCAP သို့ DarkTokenDT2.3 Blockchain CapitalBCAP သို့ CETUS CoinCETI7357.46